June 12, 2020 - PARIJATMEDIA
०७७ जेठ ३१ गते शनिबार ई. स. २०२० जुन १३ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
वि.सं. २०७७ जेठ- ३१,शनिवार,ई.सं. २०२० जून-१३ ,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० तछलागा,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,आषाढ कृष्णपक्ष तिथि-अष्टमी , २५:४२ बजे उप्रान्त नवमी, नक्षत्र-पूर्वभाद्रपदा , २२:४४ बजे उप्रान्त उत्तरभाद्रपदा, योग-प्रीति , १२:५३ बजे उप्रान्त आयुष्मान्,करण-वालव १२:५० बजेदेखि कौलव , २५:४२ बजे उप्रान्त वालव,चन्द्रराशि-कुम्भ,आनन्दादि योग-काल, सूर्योदय- ०५:०९, सूर्यास्त-१८:५९,दिनमान-३४ घडी ३३ पला । पञ्चक । व्रत/पर्व-अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, देउपाटनमा त्रिशूलयात्रा, भलभल–अष्टमी। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध सुदृड हुनेछ । अध्यनमा प्रगति हुँने हुँदा बिद्यार्थि वर्गका लागि आजको दिन फलदायि रहनेछ । नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गरि शुरु गरिएका कामहरु समयमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । अत्या
लक’डाउन’मा निजी गाडी, गृह मन्त्रालय र ट्राफि’क प्रहरी’का दुई नियम’ले अन्योल
काठमाडौँ : मुलुक'मा जारी लकडाउ'न खुकुलो भएसँगै यातायात सञ्चालनबारे सरकार र ट्राफिक प्रहरीबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। ४ पाङ्ग्रे र २ पाङ्ग्रे निजी सवारी सञ्चालनका बिषयमा जोर बिजोर प्रणाली'का बिषयमा ट्राफिक प्रहरी र गृहमन्त्रालयको मत बाझिएको हो। गृहले सबै निजी सवारी साधनमा यो प्रणा'ली लागु हुने बताए पनि ट्राफिक महाशाखाले भने २ पाङग्रे सवारीमा यो प्रणाली लागु नगरेको बताएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै पहिलो चरणमा निजी सवारी साधन सञ्चालनका लागि जोर–विजोर प्रणालीको निती अख्तियार्रे गरेको छ। तर, निजी सवारी साधन चल्ने दिने कार्यविधिका बिषयमा गृह मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीबीच अन्योल देखिएको छ। गृहले सबै किसिमका निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर नम्बर प्रणाली लागु हुने बताए पनि ट्राफिक प्रहरीले २ पाङग्रे सवारीमा यो प्रणाली लागु नहुने जानकारी दिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता ज
लकडाउनमा कुकुरसँग रमाउँदै करिश्मा [फोटो फिचर]
सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धरले सामाजिक संजालमा तस्विर शेयर गरिरहन्छिन्। उनले लकडाउनको समयमा घरमै समय बिताएका बिभिन्न सुन्दर तस्विर सार्वजनिक गरिरहेकी हुन् । करिश्मा मानन्धरले सन्तान फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा पाइला चालिन् ।केहि पहिला राजनीतिमा समेत हाम्फालेकी करिश्मा फिल्मका अवला सामाजिक संजनलमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । ‘सन्तान’बाट करिअर सुरु गरेकी करिश्माले अब आफ्नै छोरीलाई फिल्ममा डेक्यु गराउने तयारीमा रहेकी छिन् । लकडाउनको समयमा फुर्सदिलि भएकी उनि एसईईको अध्ययन पूरा गरेर उच्च शिक्षा पढ्न थालेकी छिन् । उनले हालै तस्विर शेयर गर्दे स्ताटस समेत लेखेकी छिन् । स्टाटसमा उनले ‘हामीले अरुकोलागि जे होस भनेर कामना गरिरहेका हुन्छौ, त्यो आफ्नो लागि पनि निम्ताइ रहेका हुन्छौ भएभरको शुभ सोचौ । उनले कोठा भाडामा बस्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरुलाइ राहत वितरणमा नुन, दाल, चा
अफ’गानिस्थान’को मस्जिद’मा बम विस्फोट, चारको मृत्यु आठ घाइते।
काबुल : अफगा'निस्तानको काबु'लस्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा चारजना मारिएका छन् । साथै आठ'जना घाइते छन् । शुक्रबारको नियमित प्रार्थनाको अवधिमा मस्जिदमा हमला भएको थियो । गृहमन्त्रालयका अनुसार काबुलको दक्षिणी क्षेत्रस्थित शेर शाह सुरी मस्जिदमा हमला भएको थियो । घटनापछि सरकारले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेको छ । विस्फोटको क्रममा मस्जिदमा धार्मिक नेता अजिजुल्लाह मोफ्लेस मारिएको बताइन्छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियनका अनुसार विस्फोटमा घाइतेहरुलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । हालसम्म विस्फोटको जिम्मा कसैले पनि लिएको छैन । पछिल्लो समय आईएसआईएल र तालिबान समूह यस क्षेत्रमा सक्रिय रहँदैआएको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् ।
सुस्मा को पेटको बच्चा कसको? मेडिकल चेक गर्दा के देखियो?(हेर्नुहोस भिडियो)
सुस्मा को पेटको बच्चा कसको? मेडिकल चेक गर्दा के देखियो?(हेर्नुहोस भिडियो)सुस्मा को पेटको बच्चा कसको? मेडिकल चेक गर्दा के देखियो?(हेर्नुहोस भिडियो)सुस्मा को पेटको बच्चा कसको? मेडिकल चेक गर्दा के देखियो?(हेर्नुहोस भिडियो)सुस्मा को पेटको बच्चा कसको? मेडिकल चेक गर्दा के देखियो?(हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौँ:चार पटक विश्व रेकर्ड बनाउन सफल नेपाली पार्कर खेलाडी दिनेश सुनार अब छिट्टै पाँचौ रेकर्ड राख्ने तयारीमा रहेका छन् । खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका सुनार पार्कर खेलको विकासका लागि पनि निरन्तर लागि रहेका छन । सारा विश्व यतिबेला कोभिड १९ का कारण सन्त्रस्त छ । हामी नेपालीहरु पनि पशुपतिनाथको भरोसामा स्व अस्तित्वको लडाईंमा छौं । सरकारले लक डाउन गरेर घरमै सुरक्षित बस्न सबैलाई अपिल गरेको छ । यसको सिधा मार काम गरिखाने बर्गलाई परेको छ १ दिनभर काम गरेर साँझ बिहानको गर्जो टार्ने मजदुर ज्यामी किसानलाई अहिले दैनिकी चलाऊनै हम्मे हम्मे परेको छ । यो समयमा पनि दिनेश सुनार आफ्नो अभ्यासमा निरन्तर लागि परि रहेका छन् । दिनेश कलाकारितामा लागेर केहि गर्ने सोचका साथ अभिनय तथा द्वन्दको प्रसिक्षण लिई रहेका छन्। उनि छिट्टै नेपाली चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा आउने सोचमा रहेका छन् र त्यसको तयारीमा जुटी रहेका छन्। थुप्रै
सीमा’मा एक भारतीय मा’रीएपछी भारतीय मिडियामा म च्चियो खै’लाबैला !
काठमाडौँ। नेपाली सुरक्षाकर्मी माथि आ’क्रमण गरि हति’यार समेत खो’सेर भा’ग्ने भारतीय नागरिक मा’रीए पछी भारतमा ह’ङ्गामा म’च्चिएको छ! घ’टनालाई भारतीय मिडियाहरुले अति’रन्जित गरि प्रकाशन/प्रशारण गरिरहेका छन् ! त’स्कर मा’रिएको घट’नालाई भारतीय मिडियाले खेतमा काम गरिरहेको किसान मा’रिएको भन्दै घ’टना तो’डमो’ड गरेका हुन् ! भारतीय चर्चित मिडिया अमरउजालाले लेखेको छ ! यो पनि पढ्नुहोस्। प्याजको रस : प्याजको रस निकालेर टाउको छालामा लगाएर २५–३० मिनेट त्यत्तिकै छाडिदिनुहोस् । कपालले सोसोस् भन्नका लागि टाउकोलाई तौलियाले छोप्नुहोस् । त्यसपछि सेम्पोले कपाल राम्ररी धुनुहोस् । प्याजका साथ बियर : बियरले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा चमकदार बनाउँछ । प्याजको रसलाई बियरमा मिसाएर लगाउनाले कपाल बढ्नुका साथै यसले कण्डिसनरको पनि काम गर्छ । कपाल लामो बनाउनु छ भने यो उपायलाई सातामा दुईपटक
४८ बर्षमा पनि उस्तै सुन्दर छिन् अबि’वाहित निरुता, हेराैँ तस्बिर
निरुता सिंह नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एक चर्चित अभिनेत्री हुन्। उनको जन्म सन् १९७२ अगस्ट १२ मा भारतको, दार्जीलिङमा भएको थियो। उनी सन् १९९३ मा तुलसी घिमिरेको चलचित्र दक्षिणा मार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्। २०७६ बैशाखमा रिलिज भएको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’को प्रचारका क्रममा नायिका निरुता सिंह उपस्थित हुन सकेकी थिइनन्। डेङ्गी लागेपछि मुम्बईमा नै उपचार गराउन परेपछि निरुता आफ्नो मुख्य भुमिका रहेको चलचित्रको प्रचारमा नै उपस्थित हुन पाइनन् । इन् । राम्रो चलचित्रको अफर आएको खण्डमा काम गर्ने उनले बताइन् । उनले क्याप्टेन (नेपाली चलचित्र) को एक गीत र नाई नभन्नु ल ५ चलचित्रमा केमियो भुमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । डौं अभिनेत्री निरुता सिंह भारतीय रियालिटी सो इन्डियन आइडलमा पुगेको बिषयले पनि चर्चा पाएको थियो। उनले फेसबुकमा सानो भिडियो बनाएर स
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, ज्येष्ठ ३१ गते शनिबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल ज्येष्ठ ३१ गते शनिबार इश्वी सन २०२० जुन १३ तारीख आषाढ कृष्णपक्ष अष्टमी तिथी पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र प्रीति योग वालव करण चन्द्रमा कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा काल योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु अष्टमी व्रत , गोरखकाली पूजा देउपाटनमा त्रिशुल यात्रा , भलभल अष्टमी (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बाणिमा मधुरता छाउनेछ । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । नयाँ लगानिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । रचानात्मक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेको छ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु होला धोका हुन सक्छ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहनाले मान सम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु
श्रीमती र तीन छोरोछोरी लाई साइकलमा राखेर ८०० किलोमिटरको यात्रा
काठमाडौँ। को’रोना भा’इरसका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित असहाय र मजदूर नै परेका छन् ।म’हामारीका कारण म’जदूर जहाँ थिए त्यहिँ भोको पेटमा बस्नु परेको छ । त्यसैले पनि उनीहरुको अवस्था दयनीय बनेको छ । उनीहरु आर्थिक सं’कटसँग् पनि त्यत्तिकै ल’डीरहेका छन् । यस्तै एउटा घ’टना भारतमा पनि भएको छ । भारतको मध्य प्रदेशको बालाघाट जिल्लाको ग्राम खुर्सीपारमा बस्ने एक म’जदूरको कहानीले सबैको आँखा आँ’शु भरिएको छ । बुधरामले लकडाउनका कारण सवारी साधन नचले पछि श्रीमती एक छोरा र दुई छोरीलाई साइकिलमा हालेर गाउँ ८०० किमीको यात्रा तय गर्दै गाउँ फर्किएका छन् । उनी हैदरावादमा परिवारसँग बसेर म’जदुरी गर्थे । तर को’रोनाका कारण रोजगारी नपाए पछि उनले साइकिलमा यति लामो यात्रा तय गरेका हुन्। केही समयअगाडी एक महिलाले १४ सय भन्दा बढी किलोमिटर स्कुटरको यात्रा गरेर आफ्नो छोरालाई घरसम्म ल्याएको खबर चर्चामा रहेको थियो । यस अनलाइन